Homeसमाचारबढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हे’र्नुहोस कुन देशको कति पुग्यो ?
April 25, 2021 admin समाचार 3022
काठमाडौँ- ने’पाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । तोकेको विनि’मय दर अनुसार आज अमेरिकी डलरको भाउ सा’मान्य बढेको छ ।अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ७२ पैसा र बि’क्रीदर १२० रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।
भारतीय रुपैयाँ १०० को ख’रिददर १६० रुपैयाँ बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा छ । बेला’यती पाउण्ड एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो ए’कको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३५ पैसा र बि’क्रीदर १४५ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरि’ददर ३२ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।कुन देशको मु’द्राको दर कति ?
यो पनि पढ्नुहोस्, काठमाडौं- खाने तेल’को मूल्य फेरि बढेको छ । का_त्तिकमा बढेको तेलको मूल्य फेरी बढाइएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । अहिले खाने तेलको मूल्य प्र’तिलिटर १० रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ रुपैयाँ’सम्मले वृद्धि भएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा गुण’स्तर र कम्पनी हेरेर खाने तेलको मूल्यमा न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि अधि&कतम २५ रुपैयाँसम्मले मूल्य बढेको हो ।
ब्रान्ड हेरेर तो’रीको तेल प्रतिलिटर १० देखि २५ रुपैयाँले बढेको छ । जसमा भट्मासको तेलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँले वृ’द्धि भएकोे छ । नफ्लावर तेल १५ देखि २० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । तोरीको तेल प्रतिलिटर २५० देखि २८० रुपै’याँसम्म, सनफ्लावर तेल २३० देखि २५० रुपैयाँ र भट’मासको तेल प्रतिलिटर २२५ देखि २३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।यसअघि तोरीको तेल प्रतिलिटर अधिकतम २४० रुपैयाँ, सनफ्लावर तेल २३० रुपैयाँ र भट्मा’सको तेल २१० रुपैयाँमै कारोबार भइ’रहेको थियो । ओएस नेपालबाट
February 20, 2021 admin समाचार 3738
बिबिसीले विश्वका प्र’भावशाली १०० महिलाको सूचीमा राखेकी सपना रोकाले दिएको उजु’रीका आधारमा विनयजंग बस्नेत प’क्राउ परेका छन् । विनयजंगले सपनाको नाँ गो तस्बिर मेरो मोवाइल र पेन’ड्राइभमा छ म आवश्यक पर्यो भने सा’र्वजनिक गरिदिन्छु भनेर
March 5, 2021 admin समाचार 3744
टिकटकमा यति’बेला राजधानीमै रहेको एक ठाउँ निकै चर्चामा रहेको छ । आर्ट इन प्याराडाईज नामक उक्त ठाउँमा यति’बेला युवाहरुको भिड लाग्ने गर्दछ, सन्चा’लनमा आएको केहि दिनमै आर्ट इन प्या’राडाईजको चर्चा चुलिएको हो र युवा पुस्ता
आफ्नै श्रीमतीलाई उनका प्रेमीसंग बिहे गराईदिने अचम्मका श्रीमान (भिडियो हेर्नुस्)
October 6, 2020 admin समाचार 8624
दागं जि’ल्लाको घोराही उपमहा’नगर पालिकामा एउटा अनौठो घटना भएको छ । एक जना पुरु’षले आफ्नै श्रीमती उनको प्रेमीसंग विवाह गरा’इदिएका छन् । आफु श्रीमतीवाट पीडित भएको, आफु हुँदाहुँदै पनि श्रीमती अरु पुरु’षसंग सम्बन्ध राखेको थाहा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (218856)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (205162)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (174098)